LEGO Winter Village 10275 Elf Club House မှဖော်ပြခဲ့သည်
03 / 09 / 2020 04 / 09 / 2020 ဂရေဟမ် 1076 Views စာ0မှတ်ချက် 10275 Elf ကလပ်အိမ်, 18 +, 2020, ခရစ္စမတ်, D2C, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, Lego, ကောလာဟလာ, ရာသီဉတုလိုက်သော, ဆောင်းရာသီကျေးရွာ
ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေအခုမြင်နိုင်ပါပြီ Lego 10275 Elf ကလပ်အိမ် အားလုံး၎င်း၏ပွဲလမ်းသဘင်ဘုန်းအသရေ၌။
ဝေမျှထားသောပုံတစ်ပုံ Lego Brickfinder မှတင်ပြသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့သည်ယခုနှစ်ပွဲတော်သစ်ကိုပြသခဲ့သည်art အဆိုပါ Creative ကျွမ်းကျင်သူဆောင်ပုဒ်၏။ The မကြာသေးမီကကောလာဟလ အစုံသည် 10275 Elf ကလပ်အိမ် နှင့်ပါဝင်သည် Lego Group ၏ပထမဆုံးသောသွန်းလောင်းသည့် reindeer
အဆိုပါ 1,197 အပိုင်းအစအစုံစက်တင်ဘာလ 23 ရက်တွင်စျေးနှုန်းသေးကြေငြာခြင်းမရှိဘဲရောင်းချရန်ဖြစ်သည်။ စန်တာ၏ elves များသည်သူတို့၏အချိန်ကျချိန်တွင်ဆွဲထားသောနှင်းဖုံးနေသောအဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သည်။ ၎င်းတွင် elves (၄) ခုနှင့်ပုံသွင်းထားသည့်သမင် (uled reindeer) အပြင်မော်ဒယ်လ်အသေးစားများကိုကိုးကားထားသည် Lego ထိုကဲ့သို့သောပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောနှင့်စန္ဒရားအဖြစ်ဒီနှစ်ကနေအစုံ။
ဆောင်းရာသီကျေးရွာများအတွက်အစဉ်အလာဖြစ်သည့် 'ဘက်ထရီများပါ ၀ င်သည်' ကိုလေးထောင့်ကွက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Winter Village စုဆောင်းမှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တကယ့်ကမ္ဘာကို ဦး တည်သည်။ 2014 ခုနှစ်တွင်သော်လည်း Lego Group မှမိတ်ဆက်ခဲ့သည် 10245 Santa's အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြန့်ချိမီ 10267 Gingerbread အိမ်.
18+ အစုံအားလုံးကဲ့သို့ 10275 Elf ကလပ်အိမ် ဖျောညှနျးဖို့အနက်ရောင် box ထဲမှာလာပါတယ် ဒါကအရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်.
← Lego Star Wars 75290 Mos Eisley Cantina ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
လက်မှတ်ထိုးထားသော LEGO Harry Potter ၏ VIP များအတွက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုန်သွားသည် →